warka duhurnimo waxa uu kamid yahay sadexda war ee ka baxa idaacada islaamiga ah alfurqaan,waxaana lagu soo qaatay qodobo kala duwan ee qeybta hoose kala deg. Halkan kala deg warka duhurnimo 02 06 2018.lite	Read More »
qeybta hoose waxaad ka dhagaysan kartaa warka subaxnimo oo saakay lagu soo qaatay qodobo kala duwan. Halkan kala deg warka subax 02 06 2018.	Read More »
Ciidamada Alshabaab oo gawaari iyo hub ku qabsaday dagaal ka dhacay duleedka Boosaaso.
Wararka naga soo gaaraya gobalka Barri ayaa ku waramaya in ciidamo aad uhubaysan oo katirsan xarakada shabaabul mujaahidiin ay weerar culus ku ekeeyeen xarun ciidan oo ay ku sugnaayeen ciidamada maamulka gobaleedka Puntland. Ciidamada xarakada ayaa si gaar ah uweeraray xerada Balli khadar iyagoo cagta mariyay ciidamadii ku sugnaa saldhigaasi. dagaalka ayaa sababay khasaaro maaliyadeed iyo mid hanti oo soo ...	Read More »
Dagaal Hub iyo Gawaari Dagaal lagula wareegay Oo ka dhacay Moqokori.
Ciidamo katirsan Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab oo aad u qalabeysan ayaa weerar saf ballaaran ah waxay ku qaadeen magaalada Moqokori oo maalmihii tagay ku sugnaayeen malleeshiyaad Amxaaro kalkaal ah oo ay Xabashidu gadaal ka riixayaan. Dagaalka oo ahaa mid culus, goordhowna soo gebegeboobay, islamarkaana la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ayaa khasaare adag waxaa lagu gaarsiiyay ciidamada dowladda ee ku ...	Read More »
Dhagayso Barnaamijka Dhacdooyinka Dunida Islaamka 16-09-1439
Barnaamijka Dhacdooyinka Dunida Islaamka waa barnaamij todobaadle ah, oo lagu soo gudbiyo arimaha Caalamka Islaamka markaas ka taagan. Halkan ka dhagayso Barnaamijka Dhacdooyinka Dunida Islaamka 01-06-2018	Read More »
warka duhurnimo waxa uu kamid yahay sadexda war ee ka baxa idaacada islaamiga ah alfurqaan,waxaana lagu soo qaatay qodobo kala duwan ee qeybta hoose kala deg. Halkaan Ka Dhageyso Warka Duhurnimo 01 06 2018.lite	Read More »